Gịnị bụ mmiri apịtị na etu esi akpụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu mmiri mmiri apịtị na otu esi akpụ ya
O doro anya na ị hụtụla a mmiri ozuzo nke apịtị. A na-akpọ ya nke a mgbe apịtị na-ekpuchi obodo dị iche iche mgbe mmiri zosịrị. N'ikwu ya n'ozuzu, mmiri na-ezo n'ebe a na-eme ka ma ikuku ma ala ma mee ka ọ dị ọcha. Agbanyeghị, n'oge mmiri ozuzo a, ihe niile ruru unyi karịa ka ọ dị na mbụ. Ma ọ bụ na ihe ndị a maara nke ọma maka ịhapụ ụgbọ ala jupụtara na apịtị.
Ga-achọ ịmata ihe kpatara apịtị mmiri na-eji na mgbe ọ na-adịkarị?
1 Ihe Mere Mmiri Mmiri Ji Kpata
2 Nyocha mmiri ozuzo
3 Mmetụta ọjọọ
4 Ogologo oge ole ka ọ ga-adịru?
Ihe Mere Mmiri Mmiri Ji Kpata
Mmiri ozuzo a dịkarịsịrị na mmiri na ọkọchị. Agbanyeghị, ọ bụ ihe mmụta ihu igwe nwere ike ime n'oge ọ bụla n'afọ. Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na Spain n'ihi ọnọdụ ya. Ihe mere ha ji adaba na uzuzu Afrika. Ọzara Sahara dị nso na mpaghara Iberian Peninsula. Nke a na-eme ka ikuku siri ike na-ebugharị aja niile ahụ n’obodo anyị.
Mgbe uzuzu nke ikuku dị na mbara igwe na-arụ ọrụ dị ka ihe dị ka hygroscopic condensation, ọ na-enye aka n'ichepụta igwe ojii. N'akụkụ nke ikuku na ikuku na-agbanwe, a na-emecha usoro maka mmiri ozuzo a. Mgbe ugwu ndị a mere, ma elu igwe ma ụgbọ ala na-acha na apịtị apịtị na apịtị.
A na-akpọkwa ha “mmiri na-asa ọbara” n’ebe ụfọdụ. Nke a bụ n'ihi na n'oge ọkọchị, apịtị apịtị nwere ike inweta obere obere ọbara ọbara. N'ime oge mmiri ozuzo ndị a, a na-ekwu ọtụtụ okwu banyere Sahara na mmetụta ya na ikuku ikuku nke Spain.
Ọzara na-aga n'ihu ewebata uzuzu n’ikuku. Dabere na ọchịchị ifufe na ike ya, oke uzuzu nke na-abanye na Spen dị ma ọ bụ obere.
Nyocha mmiri ozuzo
A na-ahụkarị mmiri ozuzo a site na onyonyo satịlaịtị. Site na onyonyo enwetara site na satịlaịtị, ị ga - ahụ gburugburu oke nkụda mmụọ na - adọta igwe ojii. Mgbe nrụgide nke ikuku belatara n'otu ebe, ikuku ga-agagharị na mpaghara nsogbu ahụ dị ala. Ọ bụ mgbe ahụ ka, dabere na akụkụ ụwa ebe anyị nọ, nke ahụ kwuru na ikuku ga-agagharị na gburugburu gburugburu mpaghara nrụgide dị ala na ntụgharị aka elekere ma ọ bụ na ntanetị.
Ọdịdị apịtị okwesighi ibu otu ogema o nwere ike ịnọ ọtụtụ ụbọchị. Ihe a nile dabere na onodu ikuku na uzo. Ọ bụrụ na nsogbu ikuku nke igwe mmiri ozuzo na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ụbọchị ma ifufe na-ebutekwu uzuzu Saharan na ya, mmiri ozuzo nke ga-eme ga-abụ apịtị niile.
A, ebe kasị emetụta apịtị mmiri ozuzo nọ na Andalusia. Nke a bụ n'ihi ịdị nso na mpaghara Afrika. A pụkwara ịhụ ha na mpaghara etiti na ọbụna na mgbago ugwu Spain, mana obere oge na ike. N'ebe dị anya karịa, obere oge ọ ga-eme.
A na-ahụ nsonazụ nke apịtị apịtị na ọnwa ụgbọ ala. Mgbe ihe omume ndị a gasịrị, ị ga-ahụ etu ụgbọ ala ndị e sijiri aja aja na-apụta. Ọ dị ka ha agabigala apiti apịtị.
Ihe a abụghị naanị n'ụgbọala, mana enwere ike ịhụ ya n'okporo ụzọ na ọbụ akwụkwọ osisi. Ọ bụrụ n ’ụbọchị ndị ahụ ị lere anya n’ elu igwe, ị ga - ahụ na ụda nke igwe ojii adịghị ọcha, kama ọ na - ewere agba igwe ojii.
Otu n’ime ihe mmiri ozuzo a na-arụ ma ọ bụrụ na ha emee n’oge ọkọchị bụ mmụba nke okpomọkụ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ikuku nke uzuzu Saharan na-eweta dị ọkụ karịa nke dị na peninsula.
Ogologo oge ole ka ọ ga-adịru?
Nke a pụrụ ime n'oge ọ bụla n'afọ. Agbanyeghị, a na-ahụkarị ya n'oge ọkọchị na oge opupu ihe ubi. Abụkarị nkwusioru nke ájá na ikuku ọ nwere ike ịdị n’agbata awa iri abụọ na anọ na iri isii. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-amalite ịla.
I gha iburu n'uche na 70% nke uzuzu nile nke uwa nile si na Sahara desert. Nke a bụ ozi dị oke mkpa iji tinye n’uche iji mata mmetụta ọ ga-enwe na mbara igwe nke ụwa dum.
Ọ bụghị nanị na apịtị a na-emetọ n'okporo ámá na ụgbọala anyị, kamakwa ọ na-enye nri na ala na n'oké osimiri. Mineral ndị a kwụsịtụrụ, nje bacteria, spores na pollen na-eme njem n'akụkụ ájá Sahara na ájá. Dị ka ha zuru, ha na-ejisi ike merie ogologo ụzọ iji ruo ebe ndị kachasị ele anya. Dịka, dịka ọmụmaatụ, n'okpuru sofa gị ma ọ bụ n'ime kọntinent Europe nke ọtụtụ puku kilomita dị anya.
Enwere m olile anya na ugbua ị nwewo ike ịmata ihe kpatara ihe ndị a ji eme 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu mmiri mmiri apịtị na otu esi akpụ ya
Na glaciation na akpụrụ afọ
Kedu ihe bụ na olee otu usoro heliocentric si arụ ọrụ?